[20 / 10 / 2019] IMM na-arịọ Haydarpasa Tender na Mọnde!	34 Istanbul
[20 / 10 / 2019] Metro Istanbul, 2 ekwupụtala banyere ọdịda ahụ	34 Istanbul
[20 / 10 / 2019] Ngwaahịa ohuru maka Sistemụ ilgbọ njem ụgbọ elu si KARDEMİR	78 Karabuk
[20 / 10 / 2019] Gịnị kpatara ụgbọ oloko ndị a ji na-aga Derail?	34 Istanbul
[20 / 10 / 2019] Ọdụ ụgbọ oloko Eskişehir ga-arụ ọrụ ọzọ dabere na nke mbụ	26 Eskisehir
[20 / 10 / 2019] Transportgbọ njem gaa Mukhtars na Izmir	35 Izmir
[20 / 10 / 2019] Ationgbọ njem ọha na Republic Day na İzmir 1 Kuruş	35 Izmir
[20 / 10 / 2019] A ga-emecha ụlọ ọgwụ Akçaray ruo mgbe a ga-emeghe ..!	41 Kocaeli
[19 / 10 / 2019] Oge nhazi oge ụgbọ oloko Konya Blue, Ahịa tiketi na okporo ụzọ	35 Izmir
[19 / 10 / 2019] Ornzọ orngbọ Afọ Mara ma ọ bụ Ndagharị	06 Ankara
Ụbọchị: 7 October 2019
Elmalı Bus Terminal na-arụ ọrụ na Ọganiru
Ihe ogwugwu ya na ala nke Elmali Bus Terminal, nke Antalya Metropolitan Obodo ga-ewu. Lọ a ga-ewepụta ọkụ eletrik nke ya site na ndọrọndrị anyanwụ, nwere akụkụ gburugburu ya. Antalya Metropolitan Municipal nke Elmali bụ ihe ọhụrụ [More ...]
Usesgbọala ndị a na-egbu oge n'okpuru nlekọta nke UKOM
Ordlọ Ọrụ Nchịkwa Transportgbọ njem (UKOM), nke ejiri teknụzụ teknụzụ kachasị ọhụrụ guzobere n'ime Ngalaba ationgbọ njem na Njikwa okporo ụzọ nke Kocaeli Metropolitan Obodo, na-arụ ọrụ na njikwa na nlezianya nke 7 / 24. A na-enyocha igwefoto ndị edobere n’ihe dị mkpa na ama ndị mmadụ site na ama ama [More ...]
Nsogbu Ormanya'da Park Agaghị Ebi
Ogige Life Life, nke na-anabata ọtụtụ ndị ọbịa si n'ógbè ndị agbata obi Kocaeli na mba ndị ọzọ, na-adọta ndị na-anọghị na nchekasị ma chọọ itinye oge na okike. Day nke ịdị n'otu nakwa dị ka ọbịa si Turkey na ụwa Ormanian [More ...]
Onye isi Njikọ Njikọ
Obodo Kocaeli anaghị eleghara ime ka ebe ndị a dị mma anya mgbe ọ rụchara ọrụ dịka okporo ụzọ, ngafe na ebe ụzọ gafere. Ngalaba Park na Green Areas dechara mpaghara ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ibe na agba maka ọrụ ahụ [More ...]
Railroad Children Group gbakọtara na Camlik Train Museum
Turkey ọtụtụ Demiryolc Children Group òtù ọtụtụ anāchi achi, na obodo nke Selcuk Aydin zutere na ụgbọ okporo ígwè ngosi nka ke obio summerhouse. Ihe dị ka ndị 200 ndị Railroad Children Group ha hiwere na mgbasa ozi mmekọrịta na-ezukọ na Camlik Steam Locomotive Museum n'ihe dị ka afọ 40 gara aga. [More ...]
Ọ ga-abịa Bursa ma nọrọ ebe ahụ a na-ewu ụlọ
Xbọchị 15 kemgbe abia n'ọfịs… 14 Okporo ụzọ awara awara na Bursa nwa oge. Na mkparịta ụka ekwentị na Öner Özgür, onye jere ozi dị ka onye njikwa mpaghara ma na-arụ ọrụ ugbu a dị ka onye na-enyere aka General Manager na-ahụ maka itinye ego na TCDD, anyị jụrụ: ca [More ...]
Maglev China na-azụ ka ịbute 1000 Km kwa elekere iji bido na 2020
Taa, ebe ụgbọ oloko dị elu gbasaa ebe niile, China na-arụ ọrụ n’akwụsịghị akwụsị maka ụgbọ oloko maglev bụ ndị webatara usoro ha na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Na ọnọdụ a, a ga-eme ọnwụnwa mbụ na mbido 2020. China bụ obodo na-agba ọsọ ọsọ maka ụgbọ okporo ígwè [More ...]
Nnukwu Tragbọ okporo Ugbo dị elu
Arezụ Elu Ugo Dị Eke. Ọrụ nke ndị otu jikọtara ọnụ na njikọ ndị ọzọ nke oflọ Ọrụ Na-ahụ Maka Transportgbọ njem na akụrụngwa mụbara site na 20. Nkọwa mbụ sitere na General Directorate of Highways. Okporo ụzọ awara awara, [More ...]
Ntụziaka Onye isi ala Erdoğan bidoro Channel Istanbul Project Ugbu a
Kwee ka ajụjụ banyere ihe mere oru ngo Kanal Istanbul bịakwute m ugbu a! Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan nyere iwu ikpeazụ na Kızılcıhamam'da. Ha na-ekwu na ị gaghị arụ ọwa Channel Istanbul, ọrụ a agafeela. A gwala oru ngo nke Channel tostanbul ka ịmalite ozugbo. CHP gbara isi ike [More ...]
Onye isi oche nke okporo ụzọ dị elu (KGM), taa (7 October) ga-adị irè dị ka pasent nke ụzọ okporo ụzọ na ntanetị ọnụ mmiri mara ọkwa na nkezi pasent na-abawanye na 20. Na nkezi, 7 metụtara ụzọ na toll tolls site na October ruo 20 [More ...]
Architects na injinia kwuru na anyị na-emegide Sapanca Teleferic Project
Ndị nnọchi anya ụlọ ndị ahụ jikọtara ndị injinia na ihe owuwu na Sakarya, zutere onye nnọchi anya ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ahụ na Sapanca. Ihe nrite ahụ meriri Bursa Cable Car [More ...]
Nchapu nhicha na Marmaray Set
Emere ihe nro maka iwepu Marmaray ụgbọ oloko site na graffiti (eserese ma ọ bụ ide na ngwongwo ọha ma ọ bụ ọhaneze). CDgbọ njem TCDD Co. Nkwupụta nke mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ahụ Ike Marmaray gwara Gazette kwuru, sị: “Ọrụ Mmezi Ọgbọ Marmaray [More ...]
ARUS nọchitere obodo anyị na Ferroviara Rail Systems Fair
Onye otu onye isi na ndị isi nke European Rail Systems Association (ERCI) Anatolian Rail Systems Cluster (ARUS) nọchitere mba anyị na Ferroviara Rail Systems Fair nke a na-eme na Milan, Italy. Anadolu Rail Systems Cluster Onye isi nchikota Ilhami Pektas kwuru na nkwupụta; Milano Italy's Milan [More ...]
Yedikuyular Ski Center Na-akwadebe maka Oge
Mịnịsta Güngör kwuru na nkwadebe maka oge a na-aga n'ihu na Yedikuyular Ski Center ma gbakwunye: yerine Anyị na-arụ ụlọ ahịa ọhụrụ nke ga-enye ndị ọbịa anyị ọrụ dị mma kama ịhapụ usoro iri nri na ị drinkingụ ihe ọ inụ drinkingụ na mpaghara. Na mgbakwunye, iwebata ngwaahịa dị na mpaghara ọhụrụ anyị [More ...]
Ugbo ala iji gbochie ihe mberede Metrobus ga-etinyere
Metrolọ Ọrụ Nkwuputa Obodo Istanbul (IMM) malitere nyocha banyere ihe mberede metrobus n'ụtụtụ a. A na-enyocha ọnọdụ nke onye njem 13 obere ahụ merụrụ ahụ. İETT, nke na-eduzi ọrụ dị mkpa iji gbochie ihe ọghọm ndị a ịlọghachị, ga-etinyekwa sistemụ Uyarı ıdọ aka na ntị na a ugbo ala. [More ...]
Antalya na Monorail na Metro ga-ezukọ
Antalya Metropolitan Municipality Mayor Onye Isi Ndụmọdụ, na-ekwupụta na ha na-eme atụmatụ ime ka mmekọrịta dị n'etiti ámá Liman na Antalyaspor. Cem Oguz kwuru, "Ọ bụrụ na anyị ahụ isi iyi si ọdụ ụgbọ elu ruo ọdịda anyanwụ nke Kundu 16 kilomita nke akụkụ ụzọ ụgbọ oloko," Oğuz Hop On Antalya [More ...]
IMM na-arịọ Haydarpasa Tender na Mọnde!
Metro Istanbul, 2 ekwupụtala banyere ọdịda ahụ
Ndekọ Njem Istanbulgbọala Metro Passes na Fraịde
Ngwaahịa ohuru maka Sistemụ ilgbọ njem ụgbọ elu si KARDEMİR
Gịnị kpatara ụgbọ oloko ndị a ji na-aga Derail?
Ọdụ ụgbọ oloko Eskişehir ga-arụ ọrụ ọzọ dabere na nke mbụ
Ga nke ọma na Injin na Mmepụta Mmepụta 'TÜMOSAN'
Ğzọ Boğazköprü, Bünyan Ngbanwe na Derevenk Viaduct mepere Ememe
Mpempe ahụ edeputara na ntụgharị na Karaman
Transportgbọ njem gaa Mukhtars na Izmir
Ationgbọ njem ọha na Republic Day na İzmir 1 Kuruş
A ga-emecha ụlọ ọgwụ Akçaray ruo mgbe a ga-emeghe ..!
Ornzọ orngbọ Afọ Mara ma ọ bụ Ndagharị
Ngosipụta ọmịiko: Ankara-Istanbul line 2. Nweta nke spare Parts maka Mgbuji ịcha
Ọktoba 21 @ 10: 00 - 11: 00
Taa na History: 17 October 1874 n'ime ndị agha Ottoman ...
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (369) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)
IMM na - ewepụ ihe ndị dị egwu na ụgbọ ala kwụsịrị